Mmadụ isii na-ebibi obodo na otu nwoke ji mpi ịnk odeakwụkwọ (1-11)
A ga-ebido n’ụlọ nsọ kpewe ikpe (6)
9 Chineke ji oké olu kwuo okwu, mụ ejiri ntị m nụ ya. Ọ sịrị: “Kpọọnụ ndị na-ebibi obodo a ka ha bịa nso, ka onye ọ bụla n’ime ha jirikwa ngwá ọgụ ọ ga-eji bibie obodo a!” 2 Ahụrụ m ụmụ nwoke isii si n’ebe ọnụ ụzọ ámá mgbago+ nke chere ihu n’ebe ugwu na-abịa. Onye nke ọ bụla ji ngwá ọgụ o ji akụgbu mmadụ. E nwekwara otu nwoke so ha nke yi uwe linin. Ọ fanyekwara mpi ịnk odeakwụkwọ* n’úkwù. Ha batakwara guzoro n’akụkụ ebe ịchụàjà e ji ọla kọpa rụọ.+ 3 Ma ebube Chineke Izrel+ pụrụ n’elu cherob ọ na-adịbu gaa dịrị n’ọnụ ụzọ ụlọ ahụ.+ Chineke wee kpọwa nwoke ahụ yi uwe linin, onye fanyere mpi ịnk odeakwụkwọ n’úkwù. 4 Jehova gwakwara ya, sị: “Gagharịa n’ime obodo a, bụ́ Jeruselem, gakwuru ndị obi na-adịghị mma, ndị na-asụkwa ude+ n’ihi arụ niile a na-akpa na ya, kaa ha akara n’egedege ihu.”+ 5 Ọ gwakwara ndị nke ọzọ okwu mụ anụ ya. Ọ gwara ha, sị: “Soronụ ya n’azụ gagharịa n’ime obodo a ma gbuo ndị mmadụ. Unu emela ebere. Unu enwekwala ọmịiko.+ 6 Gbuonụ ma agadi ma nwa okorobịa ma nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ma nwatakịrị ma ụmụ nwaanyị. Gbuchaanụ ha.+ Ma, unu agala onye ọ bụla nwere akara ahụ nso.+ Malitekwanụ n’ụlọ nsọ m.”+ Ha wee malite ná ndị okenye nọ n’ihu ụlọ ahụ.+ 7 Ọ gwakwara ha, sị: “Merụọnụ ụlọ a, meekwanụ ka ndị e gburu egbu ju n’ogige dị na ya.+ Gawanụ!” Ha wee gaa gbuo ndị nọ n’obodo ahụ. 8 Ha gbugidere ndị mmadụ, naanị m afọdụ. M gbukwara ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, tiekwa mkpu, sị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova! Ị̀ na-ebibi ndị niile fọdụrụ n’Izrel n’ihi iwe ị na-ewesa Jeruselem?”+ 9 Ya asị m: “Mmehie ndị Izrel na Juda karịrị akarị.+ Ọbara ndị e gburu egbu juru n’ala ha.+ Mpụ jukwara n’obodo ha.+ Ha sịrị, ‘Jehova ahapụla ala a. Jehova anaghị ahụ anyị.’+ 10 N’ihi ya, agaghị m emere ha ebere.* Agaghịkwa m enwere ha ọmịiko.+ M ga-eme ka ha jiri isi ha buru ihe ha metara.” 11 M hụkwara ka nwoke ahụ nke yi uwe linin, onye fanyere mpi ịnk n’úkwù, nọ na-akọ otú o si jee. Ọ sịrị: “Emeela m ihe ị gwara m mee.”
^ Ma ọ bụ “ihe odeakwụkwọ ji ede ihe.”
^ Na Hibru, “anya m agaghị emere ha ebere.”